अमेरिकामा एएनएको इतिहास निकै लामो छ ।﻿
होमपेजअमेरिकाअमेरिका गतिविधिअमेरिका विशेषराष्ट्रिय समाचारराजनितीसमाजअर्थखेलकलाविविधबिचारअन्तरवार्तारिपोर्टसाहित्यसमिक्षा तथा समालोचनाकितावनिबन्धडायरीकथागित, गजल, मुक्तकसगरमाथा विषेशसगरमाथा समाचारलेख तथा संस्मरणपर्वतारोही प्रफाईलगीत संगीतगीत सुन्नुहोसप्लेलिष्टमा जानुहोस्अनलाईन रेडियोम्युजिक भिडियोभिडियो प्लेलिष्टफोटो ग्यालरीहाम्रो बारेमा	विविधअन्तरवार्ता अमेरिकामा एएनएको इतिहास निकै लामो छ ।﻿	अमेरिकामा एएनएको इतिहास निकै लामो छ ।﻿	सोमबार, 04 जुन 2012 17:05 साहित्यीक दुनियामा चिनिएको नाम हो छेवाङ शेर्पा लामा । अन्तराष्ट्रिय नाटक प्रतियोगिताका उत्कृष्ठ कलाकार थिए उनी । तीन दशक लामो इतिहास बोकेको अल नेपालिज एसोसियन इन अमेरिका ( एएनए) संग उनकेा लामो सम्बन्ध छ । त्यही सम्बन्धको कारण एक दशक अघि खारेज भएको यो सस्थालाई उनकै पहलमा जीवन्त दिने कार्य गरियो । साहित्य क्षेत्रमा गीतकारको नामबाट परिचित लामाले अहिलेसम्म विभिन्न ७ एल्बम प्रकाशित गरिसकेका छन । सोलुखुम्बु निवासी लामाले मेरो प्यारो सोलुखुम्बु, मेरो एउटा सपना, यो मायाको सागर, सालिना र सिम्पल मङक जस्ता गीत एल्बम निकालिसकेका उनले शेर्पा कविता संग्रह समेत प्रकाशनको तयारीमा जुटेका छन । अमेरिकाभरिका नेपालीहरुको साझा सस्था (एएनए) अब झन क्रियासिल बनाउनु पर्ने संकल्प गरेका लामासंग एभरेष्ट टाइम्सका लागी आङछिरिङ शेर्पाले गरेको कुराकानी ।
लामो समयपछि यतिखेर कसरी एएनएमा लाग्नु भयो ?
एएनएमा म भर्खरै लागेको होइन २५ वर्ष अघिदेखिनै लाग्दै आएको थिए । यो सस्थामा म दुई पटक कार्यसमितिमा पनि चुनिएको थियो । तर वीचमा एएनएको कार्यसमितिको निर्वाचन ताका एक जना पुर्व अध्यक्षको व्यवहारको कारणले करिब १५ वर्ष टाढा हुन पुगे । तर पछिल्लो समयमा लामो समयदेखिन अमेरिकाको एनआरएनसीसीमा दुई समुहको विवाद थियो । त्यही सस्थाको नेतृत्व गर्ने मित्रहरुको अनुरोधमा यी सस्था वीचको विवादलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी पुरा गरे । सायद त्यो सफलता देखेर होला त्यही क्रममा प्रख्यात एएनएको बोष्टन सम्मेलनको आर्थिक हिनामिना काण्डको छानवीन समितिको संयोजकको रुपमा मलाई पुन: जिम्मेवारी दियो । समग्रमा भन्नुपर्दा उहाहरुकै विश्वासमा एएनएमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो । बोष्टन सम्मेलनको आर्थिक हिनामिना समास्या समाधानतिर लागीरहदा मैले एएनए १० वर्ष अघिनै खारेज भइसकेको थाहा पायो । जुन यस अघिका नेतृत्वकर्ताहरुले १० वर्षसम्म विना हिसाब किताब गैरकानुनी रुपमा चलाएको देखियो । एकतिर एएनएको नेतृत्वको निर्वाचन र सम्मेलन पनि गर्न लागीरहेको बेला गत वर्ष एक पक्षले एएनए विरुद्ध मुद्धा हाल्ने कार्य गरियो । तर पछि ती पक्षले अदालतमा हालेकेा मुद्धा फिर्ता लिएपछि अदालतको न्यायधिसको निर्णय अनुसार आगामी निर्वाचनसम्मको लागी मलाइनै अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । सस्थालाई कानुनी र आर्थिक रुपमा सस्थाको जिम्मा मलाई लगाएपछि साथीहरुकै आग्रहमा म यसरी लागे ।
यतिको लामो इतिहास बोकेको सस्थाले अहिलेसम्म केही पनि गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
सबैभन्दा पहिला त एएनएन ३० भएपनि केही पनि गरेको छैन भन्ने मान्छेहरुको सोचाईनै गलत हो । किनकि सायद तपाई बसेको ठाउमा नहोला तर मेरिल्याण्डमा एएनएकै कारणले बुद्ध पशुपतिनाथको मन्दिर निर्माण भएको छ । यो सम्पत्ति अरु कुनै सस्थाले गरेको होइन एएनएलेनै जोडेको हो । यसको साथै हरेक वर्ष यो सस्थाले सम्मेलन गदै अमेरिकाभरिका नेपालीहरुलाई एक ठाउमा खुसीयाली साटने काम एएनएले बाहेक अरु कुनै पनि नेपाली सस्थाले गर्न सकेका छैन । तर यो सस्था डाक्टर, इन्जिनियर लगायत समाजका विद्धान कहालिएका व्यक्तिहरुले चलाएपनि जति प्रगति गर्नु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको म पनि स्वीकार्छु । त्यो लपारवाहीको कारणले भएको हो ।
यस्तो पुरानो सस्थाको दर्ता खारेज भइसकेको एक दशक वितिसक्दा पनि सवै चुप लागेर बस्नुको कारण के होला ?
सस्था भनेको सबैको सहयोगमा कसैले स्थापना गरेको हुन्छ । तर एएनए सस्थामा सस्थापक मित्रहरुको मनस्थिति अझैसम्म पनि आफनै प्रबुद्ध त्यही सस्थामा रहीराख्ने दुष्प्रयासहरु हुदै आएका छन । सधैभरि एक तहको व्यक्तिहरुले मात्र अधीनमा राख्ने गरेकाले सस्था अघि बडन नसकेको हो । त्यो मात्र होइन उहाहरुले नया पिढिलाई स्वतन्त्र रुपमा अघि बडन कहिल्यै दिएन जहिलेपनि आफनै प्रबुद्धमा राख्दै आएकाले पनि सस्था सञ्चालनकै क्रममा नेतृत्वकर्ताले जहिले पनि कमजोरि र लापारवाही गदै आएका छन । त्यसकै परिणाम स्वरुप सन २००२ मा एएनएको दर्ता खारेज भइसकेको हो । तर तै चुप मै चुप लागेर बसेका थिए । बास्तबमा एएनएमा नेतृत्व गर्नेहरुले आफुहरुले विगारीसकेको कुरा बाहिर जनताको अगाडी आउछ भन्ने डरले यो सस्थालाई नविकरण गर्न नचाहेको देखियो । अथवा सस्थाभित्रको धेरै गडबडीहरु लुकाइराख्यो । तर आखिर अमेरिका जस्तो ठाउमा कुनै पनि सर्वसाधारणको हकमा भएको सस्थाको कुराहरु लुकाएर लुकाउन सकिने ठाउ भएन । यसरी पर्दाफास भयो । मुख्यत लावारवाही र हेलचेक्राईकै कारण सस्था खारेज भएको हो ।
एएनएको इतिहासमा सर्वाधिक धेरै बोष्टन सम्मेलनमा भएको आर्थिक घोटालाको छानवीन कसरी गर्नुभयो ?
बोष्टन सम्मेलनमा भएको आर्थिक हिनामिना भनु या भ्रष्टचार जे भनेपनि त्यो एएनएले गरेको होइन । बोष्टन सम्मेलन भनेकै स्थानीय ग्रेटर बोष्टन नेपाली कम्युनिटि- जिविएनसी) लाई व्यापारिक हिसाबले एएनएको पदाधिकारीसंग मिलेर गरेको कार्यक्रम थियो । त्यतिखेर एएनए र जिविएनसिका पदाधिकारीहरु वीच नाफा भएमा एएनएले ७० प्रतिसत पाउने र नोक्सान भए त्यतिनै तिर्ने र त्यस्तै गरि जिविएनसीले पनि नाफा भए ३० प्रतिसत पाउने भनेर लिखित सम्झौतामा सम्मेलन गरेको थियो । छानवीनकै क्रममा मैले उनीहरुसंग सबै विल भपाई देखाउनुस भनेर मागे तर उहाहरुबाट कुल रकमको आयश्रोत र खर्चको २५ प्रतिशत मात्र आधिकारिक विल भपाई दियो । त्यो विल भपाईलाई मद्धत पुग्ने कागजत पनि पाएन । त्यही अनुसार मैले स्वतन्त्र ढंगबाट प्रतिवेदन बनाए त्यसमा यो अपुरो हिसाब भएकोले एएनएले जिम्मा लिन सक्दैन भनी हिसाव पुरा गरेर ल्याएपछि मात्र जिम्मा लिन्छु भनेर लेखेका थिए । त्यसपछि अदालतले समेत मलाई सस्थाको हरहिसाब चाडो मिलाउनु भने बमोजिम उहाहरुलाई तुरुन्तै सम्पर्क गरेर दुई हप्ताभित्रमा हिसाब किताब मिलाउने चेतावानी दिए । त्यही उनीहरुले नाफा र नोक्सानको सबै जिम्मेवारी लिन्छु भनेर गरेको सम्झौता अनुसार तिर्न बाकी सबै तिर्ने र घाटा वेहार्ने भने बमोजिम अन्तिम टुङगोमा लागेको छ । तर केही व्यक्तिले एएनएप्रति आफनै निजि वेभसाइड मार्फत सार्वजनिक सुचना जारी गरि सस्थालाई मुद्धा हाल्छु भनेकोले वकिलको राय अनुसार तिर्नपर्ने १६ हजार डलर तिर्न रोकेको छ ।
बोष्टन विवादपछि डिसि सम्मेलन र अब हुने डाल्लास टेक्सासको सम्मेलन कसरी गदै हुनुहुन्छ ?
बोष्टन सम्मेलनपछि एएनए ३० वर्षको इतिहासको सवैभन्दा सफल डिसि सम्मेलन सावित भयो । किनकि त्यतिको दवाव, विवादसंगै एएनएको ७ जना पुर्व अध्यक्षहरुले समेत सम्मेलन बहिष्कार गरेको त्यो सम्मेलनमा आफैमा व्यवस्थित र नाफामुलक सम्मेलनको रुपमा चिनियो । हामीले त्यो सम्मेलनबाट प्रमाणित गरिदियौ कि नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरेमा सस्थालाई नाफा पनि कमाउन सकिन्छ भनेर । जतिखेर ३ हजार भन्दा बढिको उपस्थिति थियो । त्यस्तै अब आउने डाल्लासको सम्मेलन डिसिको सम्मेलन भन्दा पनि सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गछौ । यसका लागी हाम्रो सवै तयारीहरु पुरा भइसकेको छ ।
३० औ डाल्लास टेक्सास सम्मेलनको मुख्य आर्कषण के हो ?
वर्षनी हुदै आएको एएनए सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्र मध्ये नेपाली खेलाडीहरुको मुख्यतः विशेष योगदान रहेको छ । खेलाडीहरुको सत्कारकै लागी ३५ हजार डलर रकम पुरस्कार वेग्लै पुरस्कारको लागी छट्टयाईसकेका छौ । विगतको सम्मेलनमा बुद्धिजीवीहरुको बढि हेलमेल हुन्थ्यो तर यस पटकको सम्मेलनमा हामीले बालबच्चाहरुलाई बढि महत्व दिएका छौ । नेपाली कला, सास्कृति र साहित्यको साथै नेपालको बारेमा चिनाउने विभिन्न कार्यक्रम राख्ने सोच बनाएका छौ । बास्तबमा यो सम्मेलन कुम्भमेला होइन गुणस्तरिय कार्यको थलानी हो भन्ने सन्देश दिलाउनका लागी लागी परेका छौ । त्यसैका लागी यस पटक तीन बेग्ला बेग्लै प्रोजेक्टहरु शुरु गर्ने योजना बनाएका छौ । जसमा नेपाल ग्रामीण विकासको लागी डा सुदिप श्रेष्ठको नेतृत्वमा एएनएको तर्फबाट एक लाख डलर , त्यस्तै अमेरिका र क्यानाडाको नेपालीको लागी एएनएले आपतकालिन कोषमा आगामी दुई वर्षभित्रमा २ लाख डलर संकलन गर्ने र नेपाल पत्रकार महासंघ मार्फत एएनएले हरेक वर्ष शुसासन सम्बन्धी राम्रो समाचार तथा लेख लेख्ने पत्रकारलाई एक लाख नेपाली रकमको पुरस्कार दिने घोषणा गदैछौ । यसको साथै यो सम्मेलनमा पहिलो पटक विश्वभरिकै इन्जिनियरहरुको भेला हुने भएको छ ।
पछिल्लो परिमार्जन ( सोमबार, 04 जुन 2012 17:16 )
ana is sherpa assactoin..???we see more sherpa ative in ana for making money.... Reply
persdent of ana .. mr sherpa is bhawun of sherpa carefull every one....